Kyoto မှာကြည့်ဖို့ဘာလဲ | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ကျိုတို, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ယနေ့တွင် ဂျပန် ဖက်ရှင်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကခရီးသွားလုပ်ငန်းသိပ်မများခဲ့သော်လည်းလွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်အတွင်းပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ coronavirus ကခွင့်ပြုပါကအိုလံပစ်အားကစားဖြစ်သည့် ၂၀၂၀ ကိုဖော်ပြရန်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဂျပန်ကတိုကျိုပဲမဟုတ်ဘူး၊ မင်းကြည့်သင့်တဲ့မြို့လည်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲဒါကအဟောင်းပဲ။ ကျိုတို.
ကျိုတိုသည်နိုင်ငံ၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီးယနေ့တွင်ပင်လူ ဦး ရေသန်းတစ်ဝက်ခန့်နေထိုင်သောအကြီးဆုံးမြို့များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်ပျက်စီးခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးမမေ့နိုင်သော“ အဘယ်သို့ငါမသိနိုင်” ဟုပြောခဲ့သည်။
၎င်းသည် ၇၉၄ မှ ၁၈၆၈ အကြားandကရာဇ်မင်း၏မြို့တော်နှင့်နေထိုင်ရာဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဗုံးများမှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့သဖြင့်၎င်းသည်လည်ပတ်မှုတစ်လျှောက်လုံးတွင်သင့်အားအတူလိုက်ပါမည့်အဆောက်အအုံဟောင်းများ၊ ဘာသာရေးနှင့်အထူးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသည်။
သင်တိုကျိုကနေရောက်လာရင် မင်းခရီးကို Shinkansen၊ ကျည်ဆန်ရထားနဲ့သွားနိုင်ပါတယ်။ အထူးအကြံပြုလိုလျှင်၊ ဂျပန်ရထား Pass ကို။ JR Tokaido ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးနှင့်ခရီးစဉ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစား ၃ မျိုးရှိသည်။ အားလုံး၏အမြန်ဆုံးဝန်ဆောင်မှု, JRP မဖုံးဘူး, 140 မိနစ်ကြာပါတယ်။ ထို့နောက် Pass အတွင်း၌သင့်တွင် Hikari ၀ န်ဆောင်မှုမိနစ် ၆၀ နှင့် Kodama လေးနာရီကြာသည်။
JRP မပါဘဲလက်မှတ်သည်ဒေါ်လာ ၁၃၀ ဝန်းကျင်ရှိသည်။ နောက်ပိုင်း 'passes' အမျိုးအစားများရှိတယ် အကယ်၍ သင်သည်နောက်ထပ်ရွေ့လျားမသွားပါကသူတို့သည် JRP နိမ့်ဆုံးထက် ပို၍ စျေးသက်သာသည်။ ငါ Shinkansen ပတ်ပတ်လည်ခရီးစဉ်, Puratto Kodama စီးပွားရေးအစီအစဉ်သို့မဟုတ်တိုကျိုအိုဆာကာ Hokuriku Arch Pass ကိုအကြောင်းပြောနေတာ။ ဒါတွေအားလုံးကရထားနဲ့ပေါ့ ဘတ်စ်ကားဖြင့် ၇ နာရီ၊ ၈ နာရီခန့်တွက်ချက်ရမည်ဒေါ်လာ ၃၅ မှဒေါ်လာ ၁၀၀ အထိ၊ နေ့နှင့်ညဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။
မြို့တော်ကိုကဏ္intoများအဖြစ်ခွဲခြားပြီးတစ်ရက်ခရီးစဉ်ကိုစဉ်းစားနိုင်သည်။ သင်ရထားဖြင့်ရောက်လျှင်အရာအားလုံးမှစတင်သည် ကျိုတိုစခန်းစျေးဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်မြို့တော်တစ်ခုခုအကြောင်းစဉ်းစားနိုင်သည့်ကျန်ရှိနေသေးသောကြမ်းပြင်များစွာပါ ၀ င်သောခေတ်မီကြီးမားသည့်ဘူတာရုံ၏အံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုမြို့၏ ၁၂၀၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောကြောင့် ၁၉၉၇ မှစတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။
ဘူတာရုံ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ရှိသည်။ မြောက်ဘက်တွင်ဗဟို၊ Karasuma နှင့်အခြားတစ်ဖက်မှာ Hachijo ဖြစ်သည်။ သင်ဘတ်စ်ကားဖြင့်ရောက်ရှိပါကကျော်ကြားသည့်နေရာ၊ ကရာဆာမာဘက်မှထွက်သွားသည် ကျိုတိုမျှော်စင်။ အဆိုပါမျှော်စင်မြို့၏အခြား icon တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၃၁ မီတာအမြင့်ရှိပြီး၊ 1964 ခုနှစ်မှရက်စွဲများ။ မီတာတစ်ရာအမြင့်တွင်လေ့လာရေးကုန်းပတ်နှင့်ကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ယင်းကိုလျစ်လျူမရှုသင့်ပါ။ လက်မှတ်ကတော့ ၈ ဒေါ်လာ၊ ယန်း ၈၀၀ လောက်ကျသင့်တယ်။
ဂျပန်ကိုလာတဲ့ tour ည့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တော်တော်များများဟာ manga နဲ့ anime ပရိသတ်တွေပါ။ ကျိုတိုမှာလည်းအသစ်တစ်ခုကိုသင်ရရှိနိုင်ပါပြီ မန်ဂါပြတိုက် ၎င်းကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်၊ အထပ်သုံးထပ်နှင့်မြေအောက်ခန်းတစ်ခုရှိပြီးစာသားအတိုင်းပင်အင်္ကျီလက်များတပ်ထားသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုပညာရှင်များနှင့်ပုံမှန်ပွဲများရှိသည်။ ကျိုတိုဘူတာကနေ ၅ မိနစ်သာမြေအောက်ရထားစီးပြီးဝင်ခွင့်က ၈ ဒေါ်လာပါ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များပိတ်လျှင်သတိထားပါ
ဘူတာရုံရိယာ၌သင်တို့လည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ကျိုတို Imperial နန်းတော်, တော်ဝင်မိသားစု၏ယခင်နေထိုင်ရာ။ ၎င်းသည်မြို့လယ်ခေါင်ရှိ Kyoto Imperial Park အတွင်းတွင်ရှိပြီးအဆောက်အ ဦး များ၊ ခန်းမများ၊ ဥယျာဉ်များသို့သင်လွတ်လပ်စွာသွားရောက်နိုင်သည်။ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားသည့်ခရီးစဉ်သည်အခြားဆိုက်များကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်သေချာသည်။ တနင်္လာနေ့တွင်ပိတ်ထားပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။
သင်ရထားများကြိုက်နှစ်သက်လျှင်၊ ဒီနေရာမှာကျိုတိုမှာဘူတာကနေမိနစ် ၂၀ လမ်းလျှောက်ရုံပဲရှိတယ် ကျိုတိုမီးရထားပြတိုက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်အထပ်သုံးထပ်၊ စတုရန်းမီတာ ၃၀,၀၀၀ နှင့်ရထား ၅၃ ခုပါရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များနှင့်ဇန်နဝါရီ ၃၀ မှ ၁ ရက်အထိပိတ်ထားပြီးဝင်ကြေးက ၁၂ ဒေါ်လာပါ။
ကျိုတိုတာဝါဘက်ခြမ်းမှဘူတာရုံကိုထွက်ခွာသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ညာဘက်သို့အနည်းငယ်လမ်းလျှောက်ပြီးမြို့ကိုဖြတ်ကျော်သောမြစ်၊ Kamogawa။ သင်လိုက်နာပါက ဦး ဆောင်လိမ့်မည် Pontochoအဆိုပါတစ်ခုမှာ gastronomic ဒေသများ မေလနှင့်စက်တင်ဘာလအကြားမြို့တော်၌အလှဆုံးနှင့်ပါဆုံး။ ဤareaရိယာသည် Shijo လမ်းမှ Sanjo လမ်းသို့ပြေး။ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ပြည့်နေသည့်လမ်းကြားဖြစ်သည်။
စားသောက်ဆိုင်နှင့်အရက်ဆိုင်အများစုကိုညနေ ၅ နာရီမှည ၁၁ နာရီအထိဖွင့်သည်။ လမ်း၏အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်ရှိသောသူတို့သည်မြစ်ကိုမျက်နှာမူ။ Al Fresco စားသောက်ရန်ယာယီပလက်ဖောင်းများကိုတည်ဆောက်သည်။ မြင်သင့်တယ်။ အဖိုးတန် ဒီထုံးစံကိုခေါ်တယ် kawayuka ရာသီအလိုက်သင်စာရင်းသွင်းပါကကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီထုံးစံမှအာမင်တစ် မြစ်ကမ်းတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ပါ နေ့အချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်သောကြောင့်လူများနှင့်တစ်ခါတစ်ရံလမ်းပေါ်မှအနုပညာရှင်များအမြဲရှိသည်။
ဘူတာမှရွေ့သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကျိုတို၏အရှေ့ဘက်ခြမ်းနှင့်မြို့ကိုလူသိအများဆုံးနေရာအတွက်ဆွဲဆောင်သောနေရာတစ်ခုသို့ဝင်သည်။ ဒီမှာ Kiyomizudera ဘုရားကျောင်းအဆိုပါ ဟီဂါရှိယာမာခရိုင်အဆိုပါ အမျိုးသားပြတိုက် သို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောဘုရားကျောင်း။
Kiyomizudera ဘုရားကျောင်းကို ၇၇၀ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြို့၏အရှေ့ဘက်ရှိတောတောင်ထူထပ်သောတောင်တန်းများတွင်တည်ရှိသည်။ 780 ကတည်းကဗိမာနျတျော ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ကျယ်ပြန့်သည့်သစ်သားပလက်ဖောင်းရှိပြီး ၁၃ မီတာတောင်ထိပ်၏အဓိကခန်းမကိုချန်ထားသည်။ ၎င်းသည်လှပသောလေ့လာရေးခရီးဖြစ်ပြီးနှစ်၏ရာသီပေါ် မူတည်၍ ချယ်ရီပန်းများသို့မဟုတ်ဆီးနှင်းများစွာရှိသည်။ အဓိကခန်းမရဲ့နောက်ကွယ်မှာ Jishu ဘုန်းကြီးကျောင်း၊
ထိုအနီးကပ်သည် Otowa ရေတံခွန်ရေစီးဆင်းမှုတစ်ခုစီတွင်မတူညီသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသောအသက်ရှည်ခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းတို့ကြောင့်သင်သောက်သုံးရမည့်စီးသုံးခုနှင့်အတူ။ လူသုံးယောက်စလုံးမှသောက်ခြင်းသည်နည်းနည်းလောဘကြီးသည်ဟုလူအများကထင်ကြသည်။ အမှန်တရားမှာရှုပ်ထွေးသောတစ်ခုလုံးကိုလည်ပတ်သင့်သည်။ ဗိမာန်တော်သို့လမ်းလျှောက်သွားသောအခါလမ်းလျှောက်ခြင်းသည်လှပသည်။ အကြောင်းမှာဟီဂါရှိယာမာခရိုင်ဖြစ်သောကြောင့်ဆိုင်များ၊
ကျိုတိုတစ်လျှောက်လုံးလမ်းလျှောက်ခဲ့ပေမဲ့မင်းမကြိုက်ရင်မင်းဘတ်စ်ကားစီးလို့ရတယ်။ ငါလမ်းလျှောက်ရတာပိုကြိုက်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလမ်းဟာသင်လမ်းညွှန်ထဲမှာမဖော်ပြထားတဲ့ထောင့်တွေထဲကိုဝင်သွားလို့ပဲ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အထူးသဖြင့်ချယ်ရီပွင့်ချိန်တွင်သင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည့်ရထားလမ်းဟောင်းတစ်ခုလုံးရှိသည်။
နောက်ဆုံးတော့ ကျိုတိုတွင်ဘုရားကျောင်းများစွာရှိသည် ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာသင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမယ်။ တစ်ချက်မှာကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းတူညီသောအရာကိုမြင်ရခြင်းကိုပင်ငြီးငွေ့လာသည် Sanjusangendo ဘုရားကျောင်း Kannon ထံအပ်နှံ။ နောက်တစ်ခုကတော့ တစ်နေ့တာခရီးစဉ် သငျသညျလုပျနိုငျအများအပြားဖြစ်ကြသည်။ သင် ... နိုင်ပါသည် နာရာသို့သွားပါ ရထားနဲ့အရမ်းနီးတယ် နရာသည်ကျောက်တုံးမီးအိမ်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောလှပသောဘုရားကျောင်းနှင့်ရှေးဟောင်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။
ဒါမှမဟုတ်သင်သွားနိုင်ပါတယ် Fushini inari နှင့်အနီရောင် toris ဝိုင်းရံကျော်ကြားသောလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်, သို့မဟုတ်ပိုမိုနီးကပ်စွာသိရန် Kinkakuji, ဘုရားကျောင်းကိုရွှေဖုံးလွှမ်း သို့မဟုတ်သွားပါ arashiyama ရထားဖြင့်၊ စက်ဘီးတစ်စီးငှား။ ဝါးတောမှလမ်းလျှောက်နိုင်သည်သို့မဟုတ်လှေလှော်များကိုငှား။ မြစ်၌ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
သင်ရွေးချယ်လိုက်သောအရာသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်၊ ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိသောကြောင့်သင်ပြန်လည်ရောက်ရှိသောအခါသင်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ မင်း kyoto ကိုပြန်သွားမယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » ကျိုတို » Kyoto မှာကြည့်ဖို့ဘာလဲ